bhimphoto: त्यो स्कुलमा पुग्दा
अघिल्लो साँझ विनोद भण्डारी दाइले सुनाएका के थिए, पुग्न रहर लागिहाल्यो । एउटा मात्रै विद्यार्थी भएको स्कुल । चारजना शिक्षक छन् । ती विद्यार्थीलाई लिन पुर्‍याउन चारजना साथी आउजाउ गर्छन् । हामी विहान ८ बजे मोटरसाइकलमा विराटनगरबाट डंग्राहाका लागि निस्कियौं ।
दुहवीनजिक नेमुवा चोकबाट पूर्व-उत्तर भएर पुगिने ठाउँ रहेछ । बाटामा हामीले एउटा मावि स्कुल भेट्यौ, जहाबाट सजिलो बाटो थाहा लाग्यो । हामी त्यो गाउँ पुग्यौं । स्कुलका अवस्था समाचारमा आइहाले । ती गन्थन गर्नु छैन । मलाई लेख्न मन लागेका कुरा ती छन् जो समाचारमा आएनन् ।
हामी डंग्राहा गाविस-४ को पञ्चायत प्राविको प्रसङ्गमा छौ । हामी पुग्दा साँढे नौ बजेको थियो । अरु स्कुलका केटाकेटी हतारमा लम्किरहेका थिए । नजिकको बोर्डिङ स्कुलमा आफ्ना नानीहरु पुर्‍याउन आमा-बालाई भएको हतार पनि देखियो । धेरैले हात समातेर हिड्दै , केही साइकलमा र फाट्टफु्ट्ट मोटरसाइकलमा नानी पुर्‍याउनेहरु देखिए । पञ्चायत प्रावि रहेको ठाउँ चौरस्ता चोक रहेछ । त्यहाँ एउटा ट्युवेल थियो । तीनजना केटीहरु लुगा धुँदै गरेका देखिए । हामीले सरहरु आउने समय सोध्यौ । कोइराला थरका सर १० बजे, प्रधानाध्यापक सर धेरैजसो नआउने, आइहाले १२-१ बजे आउने जानकारी मिल्यो । हामी चोकको घुम्ती पसलमा बस्यौं । पसले पनि शायद नानीहरु स्कुल पुर्‍याउन गएका थिए । किनकि बन्द थियो । त्यसको फलैंचामा बसियो । भेटिएका मान्छेसग गफ गरियो । यतिकैमा उनीहरुले खेल्दै गरेको एउटा फुचे देखाए र, भने 'ऊ यही हो यो स्कुलको विद्यार्थी । यहाको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको छोरा हो ।'
हामीले राहुल ठाकुरलाई बोलायौ । उसलाई सोधेपछि थाहा भयो, २ जना सर, २ जना मिस छन् स्कुलमा कार्यरत । एकजना सर आउछन् । एकजना मिस सुत्केरी छिन् । हामी उसलाई घर देखा भाइ भन्दै पछि लाग्यौ । ५/७ घरको गल्ली बाटो भएर उसले आफ्नो घर पुर्‍यायो । त्यहा उसका पिताजी भेटिएनन् । राहुलका काकाले भने 'दाजु विहेमा उर्लावारी जानु भएको छ । बन्दले फर्कन पाउनु भएन ।' हामीले उनको मोवाइल नम्बर माग्यौं र, फेरि स्कुल तिरै लाग्यौ । चोकमा पुगेर फेरि स्थानीयसग कुरा गर्दै गर्दा राहुल स्कुले पोशाकमा किताव लिएर आए ।
केहीबेरमा शिक्षक जीवनाथ कोइराला आइपुगे । उनको घर छिमेकी गाविस दुलारीमा रहेछ । त्यहाबाट चप्पल पड्काउदै साइकल चलाउदै आएका उनलाई एकजना स्थानीय बुढाले फलैचामा बस्न आग्रह गरे । कोइराला सरले राहुललाई भने 'जा मिसलाई बोलाएर ल्या ।' विनोददाईलाई किताव दिएर ऊ बोलाउन गयो । बुढाले हाम्रा बारेमा भनिदिएपछि उनले स्कुलमै गएर बसौं भने । केहीबेरको कुराकानीपछि उतै लागियो ।
स्कुलका भवनहरु पक्की रहेछन् । टीनको छानो । कक्षा कोठा खुलै थिए । अफिसकोठाको ढोकामा ताला लागेको थियो । उनले राहुल आइपुगे । भने 'मिस हुनुहुन्न ।' सरले फेरि भने 'दौडेर जा । मिसको बाट चाबी लिएर आइज ।' राहुल फेरि गए । हामी बाहिरै उभिएर कुरा गर्‍यौं । राहल आए । अफिस कोठा खोलिदिए । सरले आफ्नै दुखेसो पोखे ।
गाउलेको भनाइमा गुरुहरुले स्कुल नियमित नआउने भएकाले बच्चाहरु अन्यत्रका स्कुलमा राख्नु परेको थियो । सरको भनाइमा स्थानीयले साथ नदिएको गुनासो थियो ।
राहुल ठाकुरको ५ कक्षाको रजिस्टरमा ६ जनाको नाम थियो । तर, उपस्थितिमा राहुलमात्रै हाजिर देखिए । १ देखि ५ सम्म नै रजिस्टरका नामहरु केलाउदा ४६ जनाको नाम भेटियो । तर, उपस्थिति एक्लो ठाकुर । अफिसमा कक्षाका किताबहरु असरल्ल देखिए ।
जीवनाथले १७ वर्ष भएछ त्यो स्कुल पढाउन थालेको । उनी सरुवा चाहदा रहेछन् । विद्यार्थी नआएर स्कुलको दुरावस्था भएको चार वर्ष भएछ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा नियम छ - पदाधिकारीका नानीहरु सोही स्कुलका विद्यार्थी हुनुपर्छ । तर, एकजना अध्यक्षबाहेक कसैका पनि नानीहरु आउदा रहेनछन् । हेर्ने र कडाइ गर्ने पनि कोही रहेनछ ।
सामुदायिक स्कुलका शिक्षकको तलब नियमित छ । सरकारद्धारा प्रदान गरिएको किताब र छात्रवृत्ति नियमित आएको रहेछ । तर, छात्रवृत्ति वितरणका बेला भीड हुने रहेछ । शिक्षक र स्थानीयको भनाइमा परस्पर एकअर्कालाई दोष देखाउने नियत देखियो । यति राम्रो स्कुललाई कसैले माया गरे जस्तो देखिएन ।
सरकारी स्कुललाई हिजोआज सामुदायिक विद्यालय भन्ने गरिएको छ । मोरङमा ६५ गाविस र विराटनगर उपमहानगरपालिका छ । यिनमा ५ सय ६२ वटा यस्ता स्कुल छन् । पञ्चायत प्रावि जस्तै अवस्था र रमिते खोला गाविसको मिक्लाजुङ प्राविको पनि छ । मिक्लाजुङ प्राविमा दुइ विद्यार्थी र तीन शिक्षक छन् । यस्ता स्कुललाई अन्यत्रको स्कुलमा गाभ्नुको विकल्प छैन । तैपनि चलेकै छन् ।
२८ बैशाख शनिवार कान्तिपुरमा छापिएको समाचार यस्तो थियो
सिंगो विद्यालयका एक्ला विद्यार्थी
डंग्राहा,( मोरङ) - विराटनगरबाट करिब १० किलोमिटर उत्तर डंग्राहा गाविस ४ मा चार सय घरले भरिएको बस्ती । बीचमा ५ कक्षासम्म पढाइ हुने भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न सामुदायिक विद्यालय । यहाँ बालविकास केन्द्रकी सहयोगीसहित चार जना शिक्षक कार्यरत छन् । घना बस्ती बीचको स्कुलमा विद्यार्थी संख्या कति होला ? लख काटौं ५०, सय या डेढ सय । यो पञ्चायत प्रावि नामको स्कुलमा एक जनामात्रै विद्यार्थी पढ्छन् । उनी हुन् राहुल ठाकुर । कक्षा ५, रोल नम्बर १ । उनी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सन्तोष ठाकुरका छोरा । समिति नौ सदस्यीय छ । उनीहरूले आफ्ना बालबालिका आफ्नै जिम्मेवारीको विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
समितिकै आठ सदस्यले भने अर्कै विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । यो विद्यालयको कक्षा १ देखि ४ सम्म एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । यसैको नाममा एउटा बालविकास केन्द्र पनि छ । त्यसका लागि सहयोगी शिक्षिकाको छुट्टै व्यवस्था । तर केन्द्रमा एक जना पनि बालबालिका छैनन् । यो स्कुलभन्दा डेढ किलोमिटर पूर्व अर्को सामुदायिक विद्यालय सर्वहितैशी निमाविमा करिब दुई सय बालबालिका पढ्छन् । उत्तरतर्फको लक्ष्मी मावि, सुप्रभात बोर्डिङ स्कुल र पश्चिमको नारायण माविमा पनि विद्यार्थी खचाखच छन् । ती विद्यार्थी यही बाक्लो बस्तीका घरका सदस्य हुन् ।
'आँगनमै भएको स्कुलमा सरमिस रेगुलर आउँदैनन् । पढाउँदैनन् । त्यसैले केटाकेटी अर्कोमा सारियो,' स्थानीयवासी आशाराम विश्वासले भने, 'पढाइदिने भए पो यहाँ राख्नु । यहाँबाट ५ पास गर्ने बच्चाले अआइई पनि जान्दैन ।' उनका अनुसार पढाइ गुणस्तरीय नभएका कारण सबै अभिभावकले आफ्ना नानीहरू आँगनको स्कुल छाडेर अन्यत्र पढ्न पठाउने गरेका हुन् । 'पोहोर मेरा दुई बच्चाले यो स्कुलबाट ५ पास गरे । उनीहरूलाई अर्को स्कुलले ६ मा भर्ना लिन मानेन । नाम पनि राम्रोसँग लेख्न नजानेपछि २ मा मात्र भर्ना लियो,' अभिभावक जीतनारायण माझीले भने, 'हेडसरलाई गुनासो गरेको उल्टै आइलागे ।' त्यो घटनापछि पनि धेरैजसो अभिभावकले आफ्ना नानीहरू पञ्चायत प्राविबाट हटाई अरूमा पठाएको उनले बताए ।
उनीहरूका अनुसार प्रअ पुरुषोत्तम चौधरी सातामा एक दिनमात्र विद्यालय आउँछन् । कहिलेकाहीं त १५ दिनमा मात्र देखिन्छन् । 'उनलाई स्कुल र यहाँ भर्ना गरिएका बच्चाको भविष्यप्रति कत्ति पनि चिन्ता भएको हामीले पाएनौं,' अर्का अभिभावक नागिन चौधरी भन्छन्, 'उनी आएका दिन पनि दिउँसो हाजिर गरेर हिँडिहाल्छन् । बाँकी शिक्षक पनि जाडोमा दिनभरि घाम ताप्छन्, गर्मीमा रूखको छहरीमा शितल खाएर घर र्फकन्छन् ।'
प्रअ चौधरीको भने आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, 'विद्यार्थी नै नआएपछि हामीले के गर्ने ?' शुक्रबार छिमेकी गाविस हात्तीमुडामा शिक्षक संघको गाउँ एकाइ गठन गर्न व्यस्त रहेका उनले भने, 'विद्यार्थी नै नभएपछि विद्यालय बसिरहनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले हाजिर गरेर पेसागत संगठनको काममा हिँडेको हुँ ।' दुई/दुईपटक घरदैलो कार्यक्रम गर्दा पनि अभिभावकले आफ्ना नानीहरू विद्यालय नपठाएको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष पनि यस्तै अवस्था थियो । 'पढाउँदै नपढाइ तलबमात्र खाएको एक वर्ष भइसक्यो । अब त तलब खान पनि लाज लाग्न थाल्यो,' उनले भने । स्थानीय अभिभावकको असहयोगले विद्यालय विद्यार्थीविहीन भएको दाबी उनले गरे ।
पाँच कक्षासम्मको उक्त स्कुलमा एकमात्र विद्यार्थी भए पनि चौधरीले ४० जनाको नाममा पाठ्यपुस्तक लगेका छन् । गत वर्षको विद्यार्थी सख्याका आधारमा पुस्तक लगिएको हो । 'पोहोर ४० जना भर्ना भएका थिए । तर वर्षभरि चार जना पनि पढ्न आएनन् । यसपालि पनि त्यही भयो', उनले भने, 'छात्रवृत्तिको रकम विद्यालयको बैंक खातामै छ ।'
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:32 PM